HeatSync inopa nzira yekuunganidza data rakaparadzaniswa kubva kune akati wandei masosi akabatanidzwa, kuronga data, kurichengeta, uye nekuripa nenzira inopa ruzivo rwakagadziridzwa mukufamba kwewebhusaiti uye mashandiro. HeatSync inodhonza data kubva kuA Alexa, SimilarWeb, Kukwikwidza, Google Analytics, Facebook, Twitter, Klout, MOZ, CrunchBase uye WOT kupedzisa chimiro, nguva uye enjini yekuenzanisira yako saiti. Webhusaiti Mbiri - Iyo HeatSync Webhusaiti Mbiri inopa yakadzama-yakazara yakajeka maonero mune ese maficha
Ndakanga ndanzwa nezveKlout nguva yadarika asi handina kunyatsoteerera kusvikira ndasangana nechikwata cheKlout muLas Vegas. Ndakaiyedza ndikaona kuti zvimwe zvezvibodzwa zvaishayikwa. Semuenzaniso, vazhinji vedu vaive nemapeji akawandisa, maakaundi akawanda, uye nhoroondo pamhepo yakatora makore gumi… asi Klout haina kukanganiswa nezvose izvi. Nguva yekupedzisira Klout paakavandudza iwo mamakisi, ivo vakandirasa zvachose. Iyo
Nhamba dzinokosha kana zvasvika pakushambadzira kwepamhepo. Ndanga ndichitsoropodza Klout asi ini ndichiri kuda kuti makambani ari kuyedza kuita metriki dzakareruka kuona nzvimbo nevanhu vane simba online. Ini handinyepere kunzwisisa chikamu cheKlout zvakanyanya, uye ini handinetseke nezvazvo zvakanyanya futi. Asi… nguva nenguva, ndinotarisa pane yangu Klout mamaki (iyo Klout iPhone app ngationei iwe uratidze!). Dai waizodaro
Pane zvakawanda zvekufamba zvichiitika izvozvi muindasitiri yekukora Ini ndinofunga Klout yakawana zvakati kushoropodza nguva pfupi yadarika… Zvakaoma kuve mukomana wekutanga pane block mune chero munda. Ndiri kutenda kuti mumwe munhu akatora basa rakaoma rekuvandudza yekutanga mapoinzi muindasitiri, zvakadaro, uye ndinovimba vanokwanisa kuchinjisa maalgorithms avo uye kuramba vachikudziridza. Mumwe wevakwikwidzi wandinoona achikwira
Tarisa vatengesi venhau venhau: huwandu hwevateveri haisi chiratidzo chakasimba chekukanganisa. Chokwadi ... zviri pachena uye zviri nyore - asi zvakare zvine husimbe. Huwandu hwevateveri kana vateveri kazhinji hauna chekuita nemunhu kana kugona kwekambani kufurira vamwe. Hunhu hunomwe hwePesvedzero PaInternet Iye anofurira anofanira kunyanya kuita hurukuro dzakakodzera. Mutambi ane vateveri ve bajillion hazvireve kuti vanogona kufurira vamwe nezve chigadzirwa chako